Madaxweyne Farmaajo oo amar ku niyad jebiyay Imaaraadka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Kadib markii maanta magaalada Muqdisho la keenay timir iyo baasto hamba ah uuna gudoomay gunti giijiye Maxamed Xuseen Rooble sharaftii qarankana halkaa ku bahdiley, ayaa la ogaaday ujeedada ayu socdeen Carabtan Imaaraadka.
”Wararka aan helayno ayaa sheegaya in gunti giijiye Maxamed Xuseen Rooble uu dalbaday lacag in la siiyo laakiin Imaaraadku u sheegay inayba lacag naga taalo Muqdisho oo haddii uu soo dhiciyo oo qaybtisa helayo ayuu yiri Cali Calasow oo xogtan helay.
Waxase si xun u niyad jebiyay madaxweynaha oo ah ilaaliyaha dastuurka iyo sharafta qaranka amrayna inaan lacagtaas tuugada ku soo gashay dalka aan la bixin karin. ”Way u dhamaatey gunti giijiye lacagtaasna umaba dhawaan karo ayuu yiri Cali Calasow.
Maxamed Xuseen Rooble oo qarankan sharaf diley ayaa waxa taageersan kooxda Xalane ayagoo aaminsan inay ka fushan karaan danahooda.